Ichangoburwa Apple Music Yakasarudzika, Frank Ocean's Album, Yakave Yakavezwa Pirated 750.000 Times | Ndinobva mac
Zvichida vazhinji venyu muri kusvika padanho rekuzadza iro server rasvika nemusoro wenyaya wePokémon GO nemusoro wenyaya weApple Music, Spotify, yakasarudzika, Universal Music ... zvirokwazvo, ingangova nhau dzese isu takaburitsa mune yekupedzisira. Kana iwe uchiguta nenyaya iyi, kutanga pane zvese ini ndoda kukumbira ruregerero, asi nhau dzandinokuudza pazasi dzave kuda kuziva kwandiri, yekunanga wakanangana nezvinofungwa neApple uye nemamwe makambani emimhanzi anotenderera. Ichokwadi kuti aya marudzi emasevhisi akonzera kuti mhirizhonga yemumhanzi idonhe zvakanyanya, nekuti kuburikidza nechishandiso chedu tinokwanisa kuwana mumhanzi wese watinoda panguva chaiyo. Parizvino zvese ndezvechokwadi.
Asi kana nyaya yezvimhanzi zvoga zvatanga kushanda, pamwe kambani iri kutaurwa, tichataura nezve Apple Music nekuti ndiyo yekupedzisira muenzaniso yezvandiri kutaura nezvazvo, zvinogona pfuti yacho inodzosera kumashure. Dambarefu razvino raakaburitsa rinoenderana nemuimbi weR & B Frank Ocean uye anonzi Blonde akasvika paApple Music svondo rapfuura uye achange aripo kwemavhiki maviri chete. Pfungwa yaApple yaive yekukwezva vashandisi vatsva vepuratifomu mushure mekuburitswa uku, asi zvirokwazvo hatife takaziva kukanganisa kwezviverengero izvo zvingave zvaive paApple Music.
Chatinoziva ndechekuti kusvika pari zvino yakadzvanywa zvakapetwa ka750.000, 25. Sekureva kweMusic Bhizinesi Pasi Pose, nyanzvi yekuyera internet data uye kuita analytics, inotaura kuti musi waNyamavhuvhu 5, mazuva mashanu mushure mekuburitswa kwealbum Blonde, yakanga yatora pasi pasi zviuru mazana manomwe nemakumi matatu neshanu nepfumbamwe. Iyi seti yezvakasarudzika yakatotariswa, neaka Kanye West's album Iyo Hupenyu hwePablo, iyo yakasvika chete kuTidal, yakaburitswa kanopfuura mazana mashanu ezviuru musvondo rekutanga rekuwanikwa. Mhedziso yatinogona kusvika ndeyekuti vanhu havasi kuzoshandura kubva kune yavo yekumhanyisa mimhanzi inopa ivo vega kusarudzika, asi asi ivo vanofarira kurodha pasi nekunakidzwa naro kusvikira rasvika pachikuva chavo.
Uye zvakare, iyi yakasarudzika system, iyo sezviri pachena isingabatsire sevhisi inoiwana zvinoenderana neaya manhamba, Yakadhura iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yeUniversal Music hukama, femu yakazivisa svondo rapfuura kuti haichazoburitsa yega chero dambarefu nemuartist zvichibva pazita rayo. Kuti utarise kuwanikwa kweiri dambarefu nyowani pamawebhusaiti makuru erukova, isu tinongofanirwa kuenda kunovatenderedza kuti tione kuti vese vane hunhu hwakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo yazvino Apple Music yakasarudzika, dambarefu raFrank Ocean, rave nepirisita mazana manomwe nemakumi mashanu
Chrome maapplication eMac, Project Wolfe, Appel Music London Mutambo uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki paSoydeMac